CP Aryal’s review of Tuin – nepali bytes
CP Aryal’s review of Tuin
April 20, 2014 March 20, 2016 nepali bytes	Comments
सशस्त्र युद्धको दुःख र मालतीसँगको प्रेमको सुखबीच हुर्किरहेको भूमिराजको कथा छ, तुइनमा। आफू बाँचेका सम्पूर्ण परदिृश्यलाई उत्कृष्ट ढंग र इमानसाथ बयान गर्दै भूमिराजले युद्धग्रस्त र भोको जुम्लाको गीत गाइरहन्छ। ऊ एउटा दुःखी पात्र हो। दुःखहरूबाट ओझेलिन ऊ निरन्तर यात्रा गररिहन्छ, बन्दुकबाट जोगिन यायावरझैँ कताकता घुमिरहन्छ। यद्यपि, उसले बाँचेको जीवन सधैँसधैँ ‘आइरोनिक’ साबित हुन्छ। ऊ दुःख, पीडा, भोक र बन्दुकको छायाँबाट टाढिन निरन्तर हिँडिरहन्छ तर तिनै कुराले उसलाई पछ्याइरहन्छन्। भन्छ, ‘म जुन अँध्यारो चिर्न हिँडेको थिएँ, आज त्यही अँध्यारोले मलाई चिरेको छ, चिराचिरा पारेर। कर्नालीमाथिको आकाशमा बारुदको बादल लागेर आँसु र रगतको झरी पार्न थालेपछि भागेको थिएँ, भाउजूलाई एक्लाएर।’
कोसौँ हिँडेर केही किलो चामल लिन गएका भूमिराज र उसका बालाई चामल नदिएर ती कर्मचारीले भट्टीमा रक्सी बनाउन चाहिँ सयौँ किलो चामल दिन्छन् ! देशमा भइरहेका कुरा यस्तै छन् र त उपन्यासमा त्यही कुरा देखाइएको छ। उपन्यासमा अनगिन्ती ‘वानलाइनर’हरू छन्, जसले प्रत्येकजसो पृष्ठमा एउटा अलग्गै मीठास छोड्न सकेका छन्। यसै गरी मालती र भूमिराजको प्रेम पस्किने लेखकीय शैली उत्कृष्ट छ। यद्यपि, मालतीसँग भूमिको भेटै नगराई पुस्तक अन्त्य गर्दा पाठकहरू खिन्न हुन सक्ने ठाउँचाहिँ छ। जीवन सोचेजस्तो कहाँ हुन्छ र ! जिन्दगीको चौघेराभित्रै त छ।
‘सस्ता दबाइका गोलीभन्दा बन्दुकका महँगा गोली पाइने किन होला कर्नालीमा? सस्ता गोली खान नपाएर ज्यान गुमाउनुपर्ने किन होला कर्नालीमा?’
CP Aryal blogs at http://cparyal.blogspot.com/
"Tuin" by Suresh Pranjali CP Aryal book reviews CP Aryal Tuin book fine print book tuin new book by Suresh Pranjali Suresh Pranjali debut novel Suresh Pranjali latest book Suresh Pranjali new book Suresh Pranjali tuin book Suresh tuin book
Buddhi Sagar’s upcoming novel is titled ‘फिरफिरे’